पोखरा रंगशाला तोकेको मापदण्ड बिनानै सम्पन्न
नेपालदृष्टि । पोखरा रंगशालामा निमार्णाधीन अभ्यास फुटबल मैदानमा माटोको लेभल नै नपुगी सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ । रंगशालाको परिसरमा निमार्ण भएको रंगशालामा अब पोल (गोलपोष्ट) राख्ने काममात्र बाकिँ रहेको छ । गत मंसिरमा निमार्ण थालिएको मैदान बिचमा रोकिएको थियो । लगत्तै चैत्रबाट शुरु गरिएको काम ५९ औँ दिनमा सम्पन्न भयो । अभ्यास मैदान त बन्यो तर माटोको लेभल भने पुगेको छैन् । मैदानको मुनिको भागमा पुरै गेगर हालिएको छ भने माथिल्लो लेभलमा थोरैमात्रामा बालुवा राखिएको छ ।
मैदानको सम्पुर्ण काम सम्पन्न भएको र पोल मात्र (गोल पोष्ट) राख्न बाकिँ रहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य राजेश गुरुङले बताए । “हामिले यतिका सम्म गर्न सकेका हौँ, हामिले केहि जोहो गर्दै काम सम्पन्न गरेका छौँ पहिलेको अवस्थामा अहिले मैदान राम्रो बनेको छ” सदस्य गुरुङले भने ।“ हामिलाई मैदान ठिकै भयो भन्ने लागेको छ, यो भन्दा बढि बनाउन सकिदैँन” उनले भने ।
उक्त मैदानको लागि ९० लाख रुपैँयाको योजना परे पनि पछि रकम भने कटौती गरिएको हो । रकम कटौती गरी निमार्ण गरिएको मैदानको अवस्था भने चोडै जीर्ण हुने अनुमान खेलकुदकर्मीहरुको छ ।
“पहिले बजेट पनि परेको थियो बजेट कटौती भएको छ माटो कहाँबाट हाल्ने माटोको लेभल पुगेको छैन् पछि गएर पहिलेको जस्तै धुलाम्मे हुने स्थिति देखिएको छ” एक खेलकुद कर्मीले बताए ।
मैदानको लागि ९० लाख परे पनि ३० लाख रुपैँयाको काम सम्पन्न भए पछि अन्य रकम भने कटौती गरिएको हो । फुटबल क्षेत्रको विकासको लागि आवश्यक समेत रहेको उक्त मैदानमा प्रदेश स्तरीय खेलहरु समेत सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।
वि.सं. २०६४ सालमा निमार्ण गरिएको उक्त मैदान दिर्घकालिन भने हुन सकेन । ०६४ सालमा निमार्ण गर्दा समेत गेगर र पागोँ माटोको कारणले मैदान धुलाम्मे हुन पुगेको थियो । करिब डेढ दशक पछि मुहार फेरिरहेको मैदानको अवस्था पुन सोहि किसिमको हुने हो भन्ने आशंका समेत पैदा भएको छ ।
०६४ सालमा निमार्ण भएको मैदान खेल्न मिल्ने अवस्थाको भने थिएन । पुरै धुुल्लाम्मे हुने र गिटि तथा गेगरमात्र निस्किने गथ्र्यो । अहिलेको अवस्थापनि उस्तै किसिमको छ । जहाँ माटोको मात्र पुगेको छैन । यस्ले गर्दा खेलाडीले पुन : सोहि स्तरको तर केहि सम्याएको मैदानमा खेल्न बाध्य हुने देखिएको छ । निमार्ण सम्पन्न हुन लागको मैदानको बारेमा सोचेर काम नगर्ने हो भने मैदान ०६४ सालको जस्तो जीर्ण हुन कुनै समय लाग्दैन ।
कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिअन्ट कस्तो हुन्छ ?
“बा, हेर त कत्रो माछा मारें ”